Xogta kaa caawin doonta inaad hesho Instagram badan oo jecel iyo raacitaanada | Martech Zone
Sabti, Sebtember 13, 2014 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka hor, Jenn Lisak wuxuu la hadlay Dave - oo sidoo kale loo yaqaan Kewiki - oo ku saabsan xeeladaha isgaarsiinta muuqaalka ee internetka. Hadaadan raacin Kewiki… Xisaabtiisu waa waajib in la raaco. Waxa uu ku dhow yahay rubuc milyan milyan oo raacayaal ah iyo shaqooyinka muuqda ee muuqaalka leh ee uu maalin walba khadka tooska ah geliya ayaa neefta kaa qaadaya. Dave waa tusaale weyn oo ah sida looga hawl galo barta Instagram! Dadaalkiisa ku aaddan ka qayb qaadashada ayaa u horseeday inuu ka shaqeeyo adduunka oo dhan.
Dabcan, sidoo kale waxaan ahay taageere waqti dheer ah Dan Zarrella, oo inta badan soo gudbiya xog muuqaal ah oo bixisa aragti ka duwan xogta. Had iyo jeer waxaan uga tagaa tusaalooyinkiisa su'aalo ka badan gabagabada - waxaan aaminsanahay inay taasi dhab tahay waxa uu isku dayo inuu ku guuleysto.
Waxaan dhawaanahan qaatay wakhti uruurinta xog ururin weyn oo Instagram ah oo aan falanqeynayay si aan u garto astaamaha sameeya sawiradu inay shaqeeyaan (ama aan shaqeyn). Natiijadu waa macluumaadka hoose ee hoose. Haddii aad xiiseyneyso faahfaahinta neerfaha dataset, waxaa jira faahfaahin ku saabsan sagxadda hoose. Dan Zarrella, Sayniska Instagram
Qaar ka mid ah natiijooyinka ayaa aad u xiiso badan… sida haddii ama aan si aad ah wax looga beddelin sawirrada iyadoo la adeegsanayo miirayaasha kala duwan ee Instagram ay soo jiitaan feejignaan badan ama ka yar. Ama haddii sawir la soo gudbiyey oo leh sumado dheeri ah uu shaqeeyo. Haduu sawir ka kakooban yahay ama ka yar yahay kakooban uu daawado wax badan ama ka yar. In sawirada madow ama iftiinka la wadaago inbadan. Ama xitaa haddii wicitaan-ku-ficil ah sharraxaaddaada ay sababi doonto helitaanka waxyaabo badan oo jecel. Natiijooyinka ayaa kaa yaabi doona!
Tags: Dan ZarrellainfographicInstagramhawlgalka instagraminstagram soo socdaxog -ogaalka instagraminstagram jeceltirakoobyada instagramxeeladaha instagramaragtida instagramkewikisayniska instagram